Tshintshela Rand Ukuze US dollar
Ihlaziywa amazinga otshintshiselwano 16/04/2021 15:50
Rand Ukuze US dollar ukuguqulwa. Rand intengo kwi US dollar namhlanje kwimarike yokutshintshiselana ngemali.
100 Rand = 6.99 US dollar
Utshintsho kwixabiso lotshintshiselwano lwe Rand ukuya US dollar yenzeka kanye ngemini. Ixabiso lokutshintsha kwemali lixabiso eliphakathi ngemini. Ulwazi malunga notshintshiselwano lwemali olunikezwe kwimithombo evulekileyo. Ukuba unayo 100 Rand, ke ngaphakathi le British Virgin Islands ungayithenga US dollar. Nge-1 Rand ngoku kufuneka unikeze 0.069915 US dollar. I Rand yehlile ngokuchaseneyo US dollar ngu -96 amakhulu ngamakhulu eepesenti.
Imali yokutshintsha Rand Ukuze US dollar
Kwiveki ephelileyo, Rand inokuthengwa 0.06853 US dollar. Kwinyanga edlulileyo, Rand inokuthengwa 0.067156 US dollar. Kwiminyaka emihlanu eyadlulayo, Rand inokuthengiselwa 0.068992 US dollar. Ixabiso lokutshintsha kwe Rand ukuya US dollar inokubonwa kwitshathi. 2.02% ngeveki - utshintsho kumanani otshintshiselwano Rand. 4.11% ngenyanga - utshintsho kumanani otshintshiselwano Rand.
Imali yokutshintsha Rand (ZAR) Ukuze US dollar (USD) Bahlala kwi zonaniso Forex
Uguqulelo lwemali Rand US dollar
Rand (ZAR) Ukuze US dollar (USD)
100 Rand 6.99 US dollar
500 Rand 34.96 US dollar
1 000 Rand 69.92 US dollar
2 500 Rand 174.79 US dollar
5 000 Rand 349.58 US dollar
10 000 Rand 699.15 US dollar
25 000 Rand 1 747.88 US dollar
50 000 Rand 3 495.75 US dollar
Isiguquli semali ngoku 10 Rand inika 0.70 US dollar. Isiguquli semali ngoku sinika 1.75 US dollar ye 25 Rand. Namhlanje, 50 Rand ziya kutshintshiselana 3.50 US dollar. Namhlanje, 6.99 US dollar inokuthengwa 100 Rand. Ukuba unayo 250 Rand, ke ngaphakathi le British Virgin Islands ungayithenga 17.48 US dollar. Ukuba unayo 34.96 US dollar, ke ngaphakathi le British Virgin Islands ungayithenga 500 Rand.
Rand Ukuze US dollar Imali yokutshintsha
Rand Ukuze US dollar namhlanje 16 UTshazimpuzi 2021
16.04.2021 0.069706 0.000847 ↑
15.04.2021 0.068859 0.00013 ↑
14.04.2021 0.068729 0.000419 ↑
13.04.2021 0.06831 -0.00022 ↓
12.04.2021 0.06853 -
Namhlanje ku 16 UTshazimpuzi 2021, 1 Rand = 0.069706 US dollar. Rand ukuya US dollar 15 UTshazimpuzi 2021 - 0.068859 US dollar. Rand ukuya US dollar 14 UTshazimpuzi 2021 ilingana ne 0.068729 US dollar. Rand ukuya US dollar 13 UTshazimpuzi 2021 - 0.06831 US dollar. Ubuncinci Rand ukuya US dollar izinga lokutshintsha kwemali ngaphakathi yayivuliwe 13.04.2021.
Rand Ukuze US dollar imbali izinga lotshintshiselwano
Rand kunye ne- US dollar iimpawu zemali kunye namazwe
US dollar uphawu lwemali, US dollar uphawu lwemali: $. US dollar State: le British Virgin Islands, British Indian Ocean Territory, East Timor, le Marshall Islands, Micronesia, Palau, le Northern Mariana Islands, eUnited States, Turks and Caicos Islands, Ecuador. Ikhowudi yemali ye-US dollar USD. US dollar Ngqekembe: ekhulwini.